ध्रुबराज अर्याल, लण्डन । बेलायतको रेडिंगमा स्थायी रुपमा बस्दै आएका छन् फिल्ममेकर प्रेम लामा । डेढ दशकअघि पहिलोपटक बेलायतमा नेपाली फिल्म बनाएका उनले त्यसयता थप ३ फिल्महरुको निर्माण गरिसकेका छन् ।
सन् १९९१ मा बेलायत आएका प्रेमलाई साहित्य, कलाप्रतिको रुची धेरै अघिदेखि नै थियो । तर पनि नेपालमै रहंदा आफ्नो रुचीअनुसार खासै केहि गर्ने मौका पाएका थिएनन् उनले ।
बेलायत आएपछि झन् वातावरण थप असहज बनेको थियो सुरुमा । तर पनि उनको लगाव र तिव्र ईच्छा निरन्तर थियो । जसको फलस्वरुप सन् २००३ मा प्रेमले बेलायतमै एक नेपाली फिल्म निर्माण गरे 'मेनिका' । जुन बेलायतमै निर्माण भएको सबैभन्दा पहिलो नेपाली फिल्म थियो ।
सन् २००९ मा दोस्रो फिल्मका रुपमा 'कसुर' निर्माण गरेका प्रेमले सन् २०१५ मा 'यु टर्न' बनाए । हालै निर्माण सम्पन्न भएको उनको चौथो तथा पछिल्लो चलचित्र 'एटीन' यहि फेब्रुअरीको २४ मा लण्डनमा प्रिमियर शो गर्ने तयारी छ ।
यी सबै फिल्महरुमा कथा लेखन, निर्देशन तथा निर्माण प्रेम आफैले गरेका छन् । यु टर्न मा शीर्ष भुमिकामै देखिएका उनले अरु चलचित्रहरुमा पनि साइड रोलमा अभिनय समेत गरेका छन् ।
हालसम्म आफ्नै निर्माण र निर्देशनमा बेलायतमै प्रेमले बनाएका चलचित्रको संख्या ४ पुगिसक्यो । हरेक फिल्मको लागि कम्तीमा ३५ देखि ४० हजार पाउण्डसम्म खर्च गरेका छन् उनले । यो हिसाबले अहिलेसम्म २ करोड रुपिया बढिको लगानी गरिसकेका उनले रिटर्न चाहिं कति पाए होला ? सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ, तर अहिलेसम्म उनले फिल्ममा गरेको लगानीको १ पैसा सम्म उठेको छैन ।
प्रेमले विगतमा निर्माण गरेका फिल्महरुलाई केहि शो बेलायतका दर्शकहरुमाझ देखाएका थिए । तर ती शोहरुबाट उठेको केहि रकम हल, टिकट प्रिन्टिंग, प्रचारप्रसार आदिमै खर्च गर्न पुग नपुग भयो ।
तेस्रो फिल्म यु टर्नलाई नेपालका समेत विभिन्न हलहरुमा लगेर देखाउने कोशिस गरे प्रेमले । जसको प्रचार प्रसारकै लागि १० लाख रुपिया खर्च भएको थियो । नेपालका आधा दर्जन भन्दा बढि हलहरुमा फिल्म चल्यो तर उनले १ पैसा पाएनन् ।
नेपालमा फिल्महरुको वितरण र प्रदर्शन गराउने सिस्टम नै फितलो रहेका कारण आफु जस्ता निर्माताहरु मर्कामा परेको उनले बुझेका छन् । विगतको अनुभवबाट थप होशियार बन्दै चौथो फिल्म एटीनलाई पनि नेपाल लगेर प्रदर्शन गराउने योजना उनीसंग छ ।
'१५ वर्ष अघि मैले करिब ५० लाख रुपिया खर्च गरेर फिल्म बनाउने बेला मेरो साथीले १५ लाख रुपियामा किनेको जग्गा अहिले करोडौं पर्ने भइसक्यो, तर त्यो देखेर मलाई दुख लाग्दैन' , प्रेमले सुनाए, 'आफ्नो फिल्ममार्फत प्रवाह गर्न खोजेको सन्देश सम्बन्धित दर्शकसम्म पुर्याउन सके मात्रै भने पनि मलाई सन्तुष्टी मिल्छ ।'
प्रेमले अहिलेसम्म बनाएका सबै ४ वटै फिल्मको सबै लगानी उनी एक्लैले गरेका हुन् । बेलायतमा उनले सञ्चालन गर्दै आएको क्याफेबाट हुने आम्दानी नै उनको फिल्म निर्माणको लागि बजेट जुटाउने एक्लो आधार छ ।
प्रेमले निर्माण गर्ने हरेक चलचित्रको केन्द्रमा बेलायतमा बस्ने नेपालीहरु रहन्छन् । उनीहरुको भोगाइ, अवस्था र भावनाहरु नै उनका फिल्महरुले बोल्ने गरेका छन् । 'फिल्म निर्माण गर्नको लागि मेरो सबैभन्दा ठूलो प्रेरणाको स्रोत नै बेलायतबासी नेपालीहरु हुन् । फिल्ममार्फत उनीहरुको अवस्था देखाउने मात्र नभएर उनीहरुकै लागि केहि सन्देश दिने उद्धेश्य मेरो रहन्छ', प्रेमले भने ।
फिल्म निर्माणमा आवश्यक पर्ने क्यामेरा, लेन्सहरु लगायतका विभिन्न इक्विपमेन्टहरु पनि उनी आफैले जुटाएका छन् । जसको लागि मात्रै करिब ४० हजार पाउण्ड उनले खर्च गरेका छन् ।
नेपाली फिल्मको लागि यति धेरै समय, शक्ति, र आर्थिक लगानी गरिसकेका प्रेम भविष्यप्रति भने निकै आशावादी छन् । उनले फिल्ममार्फत दिन खोजेको सन्देश लक्षित दर्शकहरुले बिस्तारै बुझ्ने क्रम सुरु भएजस्तो उनलाई महसुस भएको छ ।
'हरेक नयाँ कुरा बुझ्न, बुझाउन तत्काल सम्भव हुंदैन, केहि निश्चित समय आवश्यक हुन्छ नै' , प्रेमलाई विश्वास छ, 'अवश्य त्यो दिन आउनेछ जब मैले फिल्ममार्फत व्यक्त गर्न खोजेकोे सन्देशलाई मेरा दर्शकहरुले बुझिदिनेछन् । त्यतिबेला मजस्ता निर्माताले फिल्ममा गरेको लगानी उठ्ने वातावरण समेत बन्नेछ ।'
‘एटीन’ को रेड कार्पेट प्रिमियर
प्रेम लामाकै निर्देशन तथा निर्माणमा बनेको चौंथो तथा पछिल्लो फिल्म हो एटीन । दुई साताअघि लण्डनमा एक कार्यक्रम गरी फिल्मको अफिसियल ट्रेलर र पोष्टर सार्वजनिक गरिएको थियो ।
प्रेमिस भिजनको ब्यानरमा निर्मित एटिनको रेड कार्पेट प्रिमियर यहि फेब्रुअरी २४ मा ह्यारोस्थित सफारी सिनेमामा गराइंदैछ । सम्पुर्ण छायांकन बेलायतमै गरिएको यस फिल्ममा नेपालबाट बेलायत आएर ‘सेटल’ भएको पहिलो पुस्ता र बेलायतमै जन्मेर यतै हुर्किएको दोस्रो पुस्ताबीच ‘जेनेरेशन ग्याप’ र त्यसले उत्पन्न गराउने पारिवारिक द्धन्द्धलाई खोजिएको निर्देशक लामाले बताए ।
एटीनमा प्रसुना कंडेल, राजदिप राई, अम्बिका राई,सनम कुमार वैराग, रितेश चाम्स लगायतका कलाकारको अभिनय छ । नेपाली समुदाय बाहिरका क्रिस एपलटन, राजा मिया, स्टेफनी सान्चेज र मिली एन्डरसनले पनि फिल्ममा अभिनय गरेका छन् ।
फिल्ममा संगीत चन्द्र कुमार डोङ र तारा प्रकाश लिम्बु, स्वर निर्मला घिसिङ र तारा प्रकाश लिम्बु, शब्द चन्द्र कुमार डोङ र अन्जु श्रेष्ठ, ब्याकग्राउण्ड साउण्ड डिजे एल.एक्स. पौडेल, सम्पादन किरण राज थापा तथा छायांकन कुशल श्रेष्ठ र अरोण अशोक कुमारको छ ।